Gabadhii ugu horreysay oo rag kaga adkaatay doorashada waqooyi bari Kenya - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, Safiya/FACEBOOK
Safiya Cabdi Nuur olole adag ayay gashay si ay kursigan ugu guuleysto
Safiya Cabdi Nuur ayaa noqotay haweenaydii ugu horraysay oo ka soo jeeda Waqooyi bari Kenya oo ka mid noqota Baaralamaanka iyadoo ka adkaatay rag la tartamayay.
Safiya oo ka tirsan xisbiga PDR ayaa laga soo doortay deegaanka Ijara ee ismaamulka Gaarisa, waxayna tartan adag la gashay Axmed Ibraahim Cabaas oo kula tartamayay kursiga xildhibaanimo. Waxayna heshay 6,0001 cod halka Axmedna uu helay 5705 cod.
Bulshada kasoo jeeda Waqooyi bari Kenya oo u badan xoolo dhaqato, ayaa in abdna oo ka mid ah waxa ay u arkaan inaan diinta iyo dhaqankoodu u ogolayn in haweenku ay hoggaanka bulshada qabtaan.
Ganacsatada Kenya oo ku baaqay in la soo celiyo noolasha caadiga
Waa markii ugu horaysay tan iyo markii Kenya xorriyadeeda heshay oo haweeney kasoo jeeda Waqooyi bari ay xil intaas le'eg ku guulaysato.
Kursiga ay ku guulaysatay Safiya Cabdi ayaa waxaa ku loolamayay musharixiin kale oo ka tirsan axsaabta kala duwan ee Kenya.
Safiya Cabdi ayaa horay u aas-aastay hay'ad u dooda xuquuqda haweenka oo la yiraahdo 'Womenkind Kenya', taasi oo dhiiri gelisa waxbarshada gabdhaha iyo arrimaha kale ee haweenka la xiriira.
Haweenaydan ayaan ku cusbayn siyaasadda, waxaana 2007-dii xisbiga mucaaradka ee ODM uu u magcaabay xildhibaan aan lasoo dooran oo kamid ah aqalka baarlamaanka.
Muddo dheer oo ay soo ahayd macalimad, ayay sidoo kale wakhti badan gelisay sidii ay ugu dagaalami lahayd xuquuqda haweenka Waqooyi bari Kenya, waxayna safka hore kaga jirtay ka hortaga dhaqamada wax u dhima dumarka sida gudniinka fircooniga ah.
Markii horaysay ayay isku dayday in ay qayb ka noqoto siyaasada sanadkii 1997-dii, waxayna iska soo sharraxday deegaanka Ijara oo hadda laga soo doortay. Maxamed Daahir Wayrax ayaana wakhtigaas uga guulaystay kurisiga xildhibaanimo.
Waxay markale isa soo sharraxday 2013-kii iyada oo ka tirsan xisbiga UPR. Markale ayaa haddana laga guulaystay. Ugu danbayntii doorashada dhacaysa sanadkan 2017-ka ayay Safiya Cabdi Nuur ku guulaystay kursiga xildhibaanimo ee deegaanka Ijara.
Sida Somaliland ay uga careysiineyso Shiinaha
13 Abriil 2021
App ay gabar u sameysay shukaansi oo suuqa kusoo galay balaayiin doolar
Maxaa kala qabsaday askari militari ah oo madow iyo boolis caddaan ah?
“Bakaylihii ugu dheeraa dunida” oo la xaday